कन्ट्र्याक्ट किलर बाट सुरु गर्दा !! | Expression: No Restriction (आवाज मेरो अधिकार )
← मेरी आमालाई युद्ध मन पर्दैन
हा हा हा !! यस्तो पनि भयो !! →
कन्ट्र्याक्ट किलर बाट सुरु गर्दा !!
Photo source: http://nagariknews.com/exclusive-news-page/24132-2011-03-10-08-38-49.html
“नेपालको केन्द्रिय कारागारमा बन्दी माथि गोली प्रहार !!” – आज यो समाचार संसार भरी फैलिएको छ, र सम्पूर्ण नेपालीलाई लाजमर्दो र मर्माहत बनाएको छ। केही समय पहिले मिलन गुरुङले जेल भित्र बाटनै ब्याबसायीलाई संघतिक हमला गरे, अर्का एक जेलमा रहेका अपराधी लाखोउ रुपयाँ र सुन सहित एमाले निकट अखिलका नेता सँग काठमाडौंको कुनै रेस्टरेन्टबाट पक्राउ परे !! कुमार घैँटे ले प्रहरिले दिएको जि.पि.यस को दुरुपयोग गरेको आरोपमा हनुमान ढोकामा बयान दिन जाँदा नुवाकोटका सभासद जगदिस नरसिंह के.सि साथैमा हनुमान ढोका गैदिए, तेस पछी प्रहरिले के बयान लियो होला !! जेल भित्रै बन्दी हरु बिचमा भिडन्त हरु हुन्छन। महिला प्रहरिलाई आफ्नै सहकर्मिले बलत्कार गर्छन् !!
आज नेपालको सुरक्षा बेबस्था कुनै हिन्दी फिल्मको कथा भन्दा कम छैनन। युनुस अन्सारि को हुन भन्ने कुरामा मलाई तेती चासो छैन, मैले सुने अनुसार उनी निकै पैसावाल मान्छे हुन र भारतीय नक्कली नोटको कारोबार गरेको आरोपमा मुद्धा खेपेको हुनाले जेलमा छन। तर आज आमनागरिकको चासो भनेको नेपालको समग्र सुरक्षा बेबस्था प्रती हो, सम्पूर्ण सुरक्षा बेबस्थाको जिम्मेवारी लिएको नेपाल प्रहरी प्रती हो र गृह प्रसासन प्रती हो। एउटा भारतीय अपराधी, जसले यहाँ भन्दा अगाडि पनि २-३ जनाको हत्या गरी सकेको छ, सजिलै हतियार लिएर मेटल डिटेक्टर सहितको सुरक्षा घेरा पार गरेर केन्द्रिय कारागारको बन्दी माथि गोली प्रहार गर्न सक्छ। यो चान चुने घटना होइन, जनता ले तिरेको राजास्वबाट तलब खाइ, चिल्ला गाडी चद्नेले यसको जबाफ दिन सक्नु पर्छ। आखिर यो देस कसले चलाई रहेको छ? नयाँ सरकार बन्ने बेलामा सधै गृह मन्त्रालयमा नै किचलो, सचिबको सरुवा बढुवा हुने बेला भयो सबैको आँखा गृहमा नै। तर सुरक्षा बेबस्थाको हालत यस्तो छ। अब त जहाँ जे पनि हुन सक्ने रहेछ नि त। तपाईं बाटामा हिँड्दा हिँड्दै, तपाईंलाई गोली नलाग्ला भनेर कसले ग्यारेन्टी दिन सक्छ? मन्त्रिले भाषाण गरीरहदा गोली नचल्ला भनेर कस्ले भन्न सक्छ। यस्तै हालत मा सुरक्षा बेबस्था बिग्रदै जाने हो भने, नेपाल पाकिस्थान बन्न धेरै समय लाग्ने छैन।
देसको अवस्था यती लाज मर्दो भएको छ कि, हिजो ठुला ठुला भाषण गर्ने गृहमन्त्री भिम रावल, पद खुस्कदा लाज पचाएर करोडोउ पर्ने गाडी देशको ढुकुटीबाट लुटेर लगे, लाग्छ उनको जिन्दगीको लक्ष भनेकै एउटा गाडी चड्नु हो (म पनि एमालेप्रती नै आस्था राख्ने भए पनि उनको त्यो बेबहारको घ्रुणा गर्दछु) । अर्का बहुत क्रान्तिकारी नेता- रबिन्द्र श्रेष्ठ, जो प्रचन्ड भन्दा त आफुनै क्रान्तिकारी हुँ भन्दै एमाले प्रबेस गरी मन्त्री बने र मन्त्री खुस्केको भोली पल्टनै आफ्नो छोरी समानकी केटी भगाएर हिँडे। अर्का माओवादीका नेता चोरिको गाडी सहित पक्राउ परे तर हुत्तिहारा माधव नेपाल सरकार ले उक्त गाडी उनकै नाम गराइदियो। माओवादीका अधीकांस नेता चोरिकै गाडी चद्छन र भाषणमा चाँही अरु हरुलाई लुटेरा र भ्रस्टचारी भन्छन। सभासदले रातो पासपोर्ट नै बेचे तर कुनै कारबाही हुन सकेन।
यि त नमुना घटना मात्र हुन जसले नेपाल कहाँ छ र कुन दिसा तर्फ गै रहेको छ भन्ने देखाउछन।
आखिर नेपालमा आज किन यस्तो भए रहेको छ? कमजोरी कहाँनेरी छ? नेपालमा कानुन छैनन त? त्यो पनि छन। आखिर किन कानुनको पालना भै रहेको छैन? यि यक्ष प्रस्न हरु हामी सबैले मनन गर्नु पर्ने भएको छ।
नेपाल प्रहरिका हाकिम हरु सबै यो पार्टी त्यो पार्टीका भएका छन, सेनामा पनि यो पार्टी त्यो पार्टी, कर्मचारी त राजनीतिक पार्टी मात्र होइनन अपराधीले नै चलाऊछन। संसारको सबै भन्दा भ्रस्ट कर्मचारीतन्त्र नेपालमा छ भन्नलाई कुनै प्रमाण जुटाइ रहनु पर्दैन।
नेपालका नेताको सपना भनेकै जिन्दगीमा एकपटक मन्त्री हुने हो। कुनै पनि एक बिषयमा दक्षता भएका नेता गन्न एक हातका सबै औंला भाँची रहनु पर्दैन। सबैको दक्षता भनेको राजनीतिमा हो र भाषाणमा हो। अनी हामी नेपाली जनता त भेडा न भएउ, आफ्नो पार्टिको नेताले देशको ढुकुटी बाट गाडी लुट्दा पनि सही देक्छोउ तर अर्को पार्टीको नेताले राम्रै गरे पनि तेसलाई खराब देक्छोउँ। हिजो प्रचन्डले, माओवादीका हतियार खोलाले बगाए भन्दा पनि हामीले पत्याएउ तर तिनै हतियार भोली कती घातक होलान भन्ने कसैले सोच्न सकेन। माधव नेपाल सरकारले अरबोउ रुपयाँ, आफ्नो खल्ती को पैसा बाँडे जस्तो गरी बाँड्यो त्यो पनि सही थापी दिएउँ। महन्त ठाकुर हरु मदेसलाई छुट्टै देस बनाउछोउ भन्छन त्यो पनि सहेकै छोउँ। रामचन्द्र पौडेल १७ पटक लाज पचाएर प्रधानमन्त्रिको चुनाव लडे तर को सँग लडी रहेका थिए, उनलाई नै थाहा छैन होला।
यस्तो छ देशको हालत। तेही खोलाको पानी अली माथि बाट तानेर आफ्नो उद्योगमा लगेर मेसिन चलाऊछन र अली मुनितिर खोलामा लगेर फोहर पानी मिसाइदिन्छन मजदुरमार कुस कुमार जोसी हरु। जो सँग फुटेको कोउडी छैन, उनी हरुकै छन नेपाल मा क बर्गका बैन्क। कुनै एउटा बैकका मालिक हुन उनी तर राष्ट्र बैन्कले प्रतेक बर्ष कालो सुची निकाल्दा उनको नाम हुन्छ। आखिर यो के हो? कस्तो बेबसाय गर्दै छन उनी? राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख भै सकेका मान्छे- मरी हत्ते गरेर गवर्नर भएका छन। लाज लाग्दइन यिनीलाई।
सबै कुरा नकरात्मक मात्र छन हाम्रो देसमा या मेरो सोच नकरात्मक हो। भयो आजलाई यतिनै लेख्नु पर्‍यो। आखिर हामी सबैले देखेको खड्केको चिज भनेको नेपाल र नेपाली मा नैतीकता न हो।
Posted on March 11, 2011, in 1 and tagged एमाले. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.